Lakabyada Dhulka, maxay yihiin qeybaha dhulka? | Saadaasha Shabakadda
Hadda waxaan ogaanay lakabyada jawiga, waa markiisa at lakabyada Dhulka. Tan iyo waagii hore waligeed waxaa la rabay in la sharaxo waxa aan hoos ku hayno Qolofka dhulka. Xagee ka yimaadaan macdanta? Immisa nooc oo dhagax ah ayaa jira? Waa maxay lakabyada meeraheennu leeyihiin? Waxaa jira waxyaabo badan oo aan la ogeyn oo la sameeyay taariikhda oo dhan oo aan dooneyno inaan ogaano.
Qeybta cilmiga dhulka (Geology) ee daraaseysa qaab dhismeedka iyo lakabyada kala duwan ee Dhulka waa Gudaha Geodynamics. Dhulkeenu wuxuu ka kooban yahay noocyo kala duwan oo cunsurro ah oo suuragaliya nolosha Dunida. Saddexdaas qodob waxay kala yihiin: Adag, dareerayaal iyo gaasas. Walxahaas waxaa laga helaa lakabyada kala duwan ee Dhulka.
Waxaa jira siyaabo badan oo loo kala saaro lakabyada Dunida. Hal nooc oo kala soocid ah waxaa loogu yeeraa goobo. Kuwaas waxaa ka mid ah jawiga, hydrosphere, iyo geosphere. Waa geosphere-ka oo ururiya dhammaan qaab-dhismeedka iyo lakabyada gudaha ee kala duwan ee meeraheenna uu leeyahay. Lakabyada ayaa loo qaybiyaa laba: Dibedda iyo gudaha. Xaaladaheena, waxaan diirada saari doonaa lakabyada gudaha ee Dhulka, taasi waa, dhulka dushiisa ayaa noqon doonta bilow.
1 Lakabyada dhulka
1.1 Qolofka dhulka
1.1.1 Qolofka qaaradda
1.1.2 Qolof badeedka
1.2 Gogosha Dhulka
1.3 Dhulka xudunta u ah
2 Qaybo ka mid ah dhulka sida ku cad tusaalaha farsamada
Si loo bilaabo sharaxaadda lakabyada Dhulka, waa inaan sameynaa labo kala duwanaansho. Ugu horreyn, heerka aasaaska kiimikada ee lakabyada kala duwan ee Dunida ayaa la aasaasay. Iyadoo la tixgelinayo halabuurka kiimikada, waxaan helnay Qolofta dhulka, gogosha iyo xudunta. Waa baaqa Naqshad taagan Qiyaasta kale waxay tixgelineysaa sifooyinka jireed ee lakabyada la yiraahdo ama sidoo kale loo yaqaan qaabka dhaqanka farsamada. Iyaga dhexdooda, waxaan ka heli lithosphere, asthenosphere, mesosphere iyo endosphere.
Laakiin sideen ku ogaan karnaa halka lakabku ka bilaabmayo ama ku dhammaanayo? Saynisyahannadu waxay heleen habab kala duwan oo ay ku ogaadaan nooca maaddada iyo kala saarista lakabyada marka la joojiyo. Joojintaani waa aagagga lakabyada gudaha ee dhulka halkaas oo nooca maaddada ay lakabku ka kooban yahay si lama filaan ah isu beddelayaan, taas oo ah, isku-darka kiimikada, ama gobolka laga helo cunsurrada (laga bilaabo adag ilaa dareeraha).
Marka hore, waxaan bilaabi doonnaa kala soocidda lakabyada dhulka ee qaabka kiimikada, taas oo ah, lakabyada dhulku waxay noqon doonaan: Qolof, gogol iyo xudun.
Lakabyada dhulka ee qaabka kiimikada
Qolofka dhulka ayaa ah lakabka ugu sarreeya ee Dunida. Waxay leedahay cufnaan celcelis ahaan 3 gr / cm3 oo keliya ayaa ku jira 1,6% dhammaan mugga dhulka. Qolofka dhulku wuxuu u qaybsan yahay laba qaybood oo waaweyn oo si wanaagsan loo kala geddisan yahay: Qolof-qareedka iyo qolofka badda.
Qolofka qaaraddu wuu sii dhumuc weyn yahay wuxuuna leeyahay qaab dhismeed aad u adag. Sidoo kale waa jilifkii ugu da'da yaraa. Waxay u taagan tahay 40% dusha sare ee Dhulka. Waxay ka kooban tahay lakab khafiif ah oo dhagax ah, oo dhexdooda dhoobo, dhagxaanta ciidda iyo dhagxaanta ay ka soo baxaan. Waxay sidoo kale leeyihiin dhagaxyo dabiici ah oo silica ah oo la mid ah granite. Xiisad ahaan, waxay ku jirtaa dhagaxyada qolof-weynaha in qayb weyn oo ka mid ah dhacdooyinka juqraafiyeed ee ka dhacay taariikhda Dunida oo dhan la duubay. Tan waxaa lagu ogaan karaa maadaama dhagaxyada ay soo mareen isbadalo badan oo jireed iyo kiimiko ah taariikhda. Tusaale ahaan, tani waxay ku caddahay safafka buuraha halkaasoo aan ka heli karno dhagaxyo qadiimiya oo weyn oo gaari kara ilaa l3.500 milyan oo sano.
Dhinaca kale, waxaan leenahay qolof badeedka. Waxay leedahay dhumuc hoose iyo qaab dhismeed ka fudud. Waxay ka kooban tahay laba lakab: lakab aad u khafiif ah oo faaruq ah iyo lakab kale oo leh basalts (waa volcanic igneous rocks). Qolofkani wuu yaryahay maxaa yeelay waxaa la muujiyay in aasaaska si joogto ah loo sameysmo loona burburiyo, sidaas darteed dhagxaanta qolofta badda wey ka weyntahay kama badna 200 milyan oo sano.
Dhamaadka qolofta dhulka ayaa ah joojinta Mohorovicic (Qaab). Joojintaani waa waxa ka soocaya qolofka dhulka iyo gogosha. Waxay qoto dheer tahay 50 km.
Qolof badeedka baddu way ka khafiifsan tahay qaaradda
Gogosha dhulku waa mid ka mid ah qaybaha Dhulka ee ka bilaabma salka qolofta illaa xudunta sare. Waxay bilaabmaysaa uun kadib joojinta Moho waana lakabka ugu weyn Dunida. Waa wax ku saabsan 82% mugga dhulka oo dhan iyo 69% cufnaantiisa oo dhan. Dharka dharka ayaa lagu kala saari karaa, markiisa, laba lakab oo lagu kala saaray Joojinta labaad ee Repetti. Joojintani waxay kudhowaad tahay 800 km waana mida kala saarta gogosha sare iyo tan hoose.
Dharka sare waxaan ka helaynaa "Lakabka D". Lakabkaan wuxuu kuyaalaa in kabadan ama kayar 200 km oo qoto dheer waxaana lagu gartaa 5% ama 10% kamid ah ayaa qeyb ahaan dhalaalay. Tani waxay keentaa kuleylka inuu ka kaco xudunta dhulka iyadoo gogosha maraysa. Markasta oo kuleylka uu kaco, dhagaxyada gogosha ayaa noqda kuwa diirran oo mararka qaarkood kor u kici kara oo sameysmaya fulkaano. Kuwaas ayaa loo yaqaan "Goobaha kulul"
Qaybta gogosha waxaa lagu ogaan karaa tijaabooyinkan:
Meteorites oo laba nooc ah: Midka hore waxaa sameeya peridotites iyo irons.
Dhagaxyada ka jira dusha sare ee dhulka oo ka soo baxa gogosha oo loo saaro dibedda sababo la xiriira dhaqdhaqaaqa tectonic.
Qiiqyada Volcanic: Waxay yihiin godad wareegsan oo qoto dheer oo ay soo mareyso magmada oo soo saartay. Waxay noqon kartaa 200 km.
Tijaabooyinka gaabiyo mowjadaha dhul-gariirka markay marayaan gogosha taasoo muujineysa inuu jiro isbeddel weji ah. Isbedelka wajiga wuxuu ka kooban yahay wax ka beddelka qaabdhismeedka macdanta.
Dhammaadka gogosha dhulka waxaan ka helaynaa Joojinta Gutenberg. Joojintaani waxay kala soocaysaa marada iyo xudunta dhulka waxayna ku taalaa qiyaastii 2.900 km oo qoto dheer.
Dhulka xudunta u ah
Dhulka udub dhexaadkiisu waa aagga ugu hooseeya ee dhulka. Waxay ka bilaabmaysaa joojinta Gutenberg ilaa bartamaha Dunida. Waa dhul wareeg ah oo leh gacan wareeg ah oo ah 3.486 km, sidaa darteed wuxuu leeyahay mug ah 16% wadarta dhulka. Cufkeedu waa 31% wadarta dhulka maxaa yeelay wuxuu ka kooban yahay maaddooyin aad u cufan.
Xuddunta dhul-gariirka magnetka waxaa loo sameeyaa iyada oo ay ugu wacan tahay qulqulka qulqulka xuddunta sare oo ku dhalaashay hareeraha gudaha, taas oo ah mid adag. Waxay leedahay heer kul aad u sarreeya oo hareeraheeda ah 5000-6000 darajo centigrade iyo cadaadis u dhigma hal ilaa saddex milyan oo jawi ah.
Heerkulka heerkiisu hooseeyo
Dhulka xuduntiisu waxay u qaybsan tahay xudunta gudaha iyo dibedda farqigana waxaa bixiya joojinta Wiechert labaad. Qaybta kore waxay u dhaxeysaa 2.900 km oo qoto dheer ilaa 5.100 km waxayna ku jirtaa xaalad dhalaal ah. Dhinaca kale, xudunta gudaha ayaa ka fidsan dhererkiisu yahay 5.100 km ilaa bartamaha dhulka qiyaastii 6.000 km waana adag yahay.
Dhulka xuduntiisu waxay ka kooban tahay inta badan birta, oo leh 5-10% nikkel iyo qayb hoose oo ah baaruud, silikoon iyo oksijiin. Imtixaanada ka caawinaya ogaanshaha aqoonta isku dhafka bu'da waa:
Qalab aad u cufan, tusaale ahaan. Cufkooda sare awgood waxay ku sii nagaanayaan xudunta dhulka.
Bir yaraanta ka jirta dhulka dushiisa, taas oo noo sheegaysa in birtu ay ku urursan tahay gudaha.
Iyada oo birta ku jirta gudaha bu'da, dhulgariirka magnetka ayaa la sameeyaa.
Qoondayntani waxay ka timid moodel tixgelinaysa isku-darka kiimikada ee qaybaha kala duwan ee Dhulka iyo cunsurrada ka kooban lakabyada dhulka. Hadda waxaan ogaan doonnaa kala-jabka lakabyada dhulka ku daydo aragtida aragtida habdhaqankeeda farsamo, taasi waa, laga soo bilaabo sifooyinka jireed ee walxaha ka kooban.
Qaybo ka mid ah dhulka sida ku cad tusaalaha farsamada
Moodelkan, lakabyada dhulka ayaa loo qaybiyaa: Lithosphere, asthenosphere, mesosphere iyo endosphere.
Waa lakab adag oo leh qiyaastii 100 km oo dhumuc ah kaas oo ka kooban qolofka iyo lakabka ugu badan ee marada sare. Lakabkan adag ee lakabka lithospheric ee ku wareegsan Dunida.
Waa lakab balaastig ah oo u dhigma inta badan marada sare. Waxaa ku jira qulqulka qulqulka waana dhaqaaq joogto ah. Waxay muhiimad weyn ku leedahay tectonics. Dhaqdhaqaaqan waxaa sababa isdhaafsi, taasi waa, isbeddelada cufnaanta qalabka.
Waxay ku taal moolka 660 km iyo 2.900 km. Waa qayb ka mid ah gogosha hoose iyo qayb ka mid ah udub-dhexaadka Dunida. Dhamaadkeeda waxaa bixiya joojinta labaad ee Wiechert.
Wuxuu kakooban yahay xudunta dhulka ee kor lagu sharaxay.
Sidaad u aragto, saynisyahannadu waxay ku baranayeen gudaha Dhulka tijaabooyin iyo caddaymo kala duwan si ay wax badan uga sii ogaadaan meeraha aan ku nool nahay. Si loo isbarbardhigo sida yar ee aan uga naqaanno gudaha meeraheenna, waa inaan aragnaa oo keliya Dhulka sidii wax tufaax ah. Hagaag, dhammaan wixii aan ku horumarinay farsamo ahaan, sahanka ugu qoto dheer ee lagu guuleystay ayaa ahaa qiyaastii 12 km oo qoto dheer. Isbarbardhiga meeraha iyo tufaaxa, waa sidaan hadda diirada saarnay maqaarka ugu dambeeya ee tufaaxa oo dhan, halkaas oo abuurka xaruntu u dhigmi lahayd bu'da dhulka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Lakabyada Dhulka
Waa wax aad u fiican, waa qoraalka lakabyada gudaha ka socda
Ku jawaab alison tatiana parra jaimes
Lakabka D¨ («double prime D lakabka») ma aha 200 kms QODOB, laakiin wuxuu leeyahay qiyaastii. 200 kms oo dhumucdiisuna. Waxaa jira macluumaad shaqeynaya, laakiin waa mid guud, dhowr jeerna faahfaahin la'aan ayaa wareerineysa akhristaha.
HA KU AADAN QODOBKAAN SHAQO IYO SHAQO KASTA.
Heerka badda wuxuu u kacayaa si ka dhakhso badan sidii loo malaynayay